Macallin u dhashey dalka Urdun Oo lagu dilay wadanka Aljeeriya. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Last updated Sep 23, 2021 198 0
Dalka Aljeeriya waxaa ka dhacday dhacdo xanuun badan oo aad looga hadal hayo wadankaas, kadib markii la heley meydka macallin u dhashey dalka Urdun oo wax ka dhigayay jaamacad ku taalla Aljeeriya, kaasoo mudooyinkii u dambeeyay la la’sanaa.
Wargeyska Ash-Shuruuq ee kasoo baxa dalka Aljeeriya ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlayo in macallinkan u dhashey dalka Urdun, asal ahaanna kasoo jeeda dalka Filastiin uu wax ka dhigayay jaamacad ku taalla magaalada Wahraan ee dalka Aljeeriya.
Maalmihii lasoo dhaafay ayaa la la’sanaa ustaad Dr Cabdullaahi Mustafaa Xasan, kaasoo da’ ahaan jira 69 sano, jaamacadana ka dhigayay maadadama xisaabta sanado badan.
Meydkiisa waxaa la soo dhigay mid kamid ah wadooyinka magaalada Wahraan, waxaana muuqata in lagu diley toorreey, iyadoo raadad tacdiibna uu ka muuqdo.
Maamulka Jaamacadda Wahraan iyo qoyska ayaa baadigoobayay macallinka maalmihii lasoo dhaafay, waxaana la waayay halka uu jaan iyo cirib dhigay, illaa ugu dambeyn la heley meydkiisa.
War kasoo baxay maamulka Jaamacadda waxay ku sheegeen in dr-ku kamid ahaa macallimiintii ugu horeeyay ee Jaamacadda, aadna ay ardeydu u jeclaayeen.
Lama oga illaa iyo hadda cida ka dambeysa dhacdadan foosha xun ee lagu dilay macallinkan Urduniga ah, asal ahaanna kasoo jeeda Filastiin, waxaana uu ifka kaga tagay xaas iyo afar caruur ah, kuwaasoo ay hadda lasoo gudboonaatay walwal iyo xanuun.